Raffle a LEAGOO T5 izahay! | Androidsis
Raffle a LEAGOO T5 izahay!
Miguel Gaton | | fifaninanana
Raha herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanambara ny Leagoo T5 presaleAndroany izahay dia gaga aminao amin'ny mpamaky rehetra ity tranonkala ity ... ny antsapaka ho an'ny singa iray an'ny Leagoo T5 maimaim-poana tanteraka ary afaka mandresy ianao amin'ny maha-mpanaraka an'ity tranonkala ity. Ho an'ireo rehetra mbola tsy mahalala an'io, ny T5 dia a smartphone finday avo lenta izay manome antsika Sharp IPS FullHD an'ny 5.5 ″, RAM 4 GB ary ROM 64 GB. Somary tery ny vidiny, satria amin'izao fotoana izao dia afaka mividy amin'ny vidiny 130 € fotsiny ianao.
Te hahafantatra ny fomba handresena ity smartphone ity ve ianao? Vakio hatrany ity lahatsoratra ity satria tena tsotra ny mandray anjara.
1 Fisarihana iraisam-pirenena
2 Ahoana no handresena ny Leagoo T5?
3 Rahoviana no hifarana ny fifaninanana?
4 Toetra ara-teknikan'ny Leagoo T5
Voalohany indrindra milaza izany aminao iraisam-pirenena ity antsapaka ity amin'izay ny mpamaky antsika rehetra dia afaka mandray anjara na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Tsy maninona fa mipetraka ivelan'ny Espana ianao, izao dia azonao atao ny mitondra an'io terminal io any an-tranonao maimaim-poana.
Ahoana no handresena ny Leagoo T5?
Tsotra be ny fandraisana anjara, mila manaraka ny torolalana tsotra fotsiny ianao amin'ireto manaraka ireto Gleam.io ary dia izay. Tsy misy afa-tsy fepetra 3 ilaina ilaina hihaona ary haharitra 1 minitra fotsiny ianao, inona no andrasanao?
LEAGOO T5 Saripika
Rahoviana no hifarana ny fifaninanana?
Afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana ianao hatramin'ny 2 Aogositra ho avy izao amin'ny 23:59. Tsy misy afa-tsy herinandro iray amin'ny fifaninanana, ka aza avela ho any aoriana ary mandray anjara ankehitriny.
Toetra ara-teknikan'ny Leagoo T5
Operating System Android 7.0 Nougat miaraka amin'ny sosona fanaingoana Leagoo OS 2.1
efijery Sharp 5.5 "FullHD IPS miaraka amin'ny haitao 2.5D sy Corning Gorilla Glass 4 fiarovana
processeur Mediatek 6750T Octa Core amin'ny hafainganan'ny famantaranandro 1.5 Ghz sy ny maritrano 64-bit
Tahiry anatiny 64 Gb miaraka amin'ny fanohanan'ny MicroSD hatramin'ny 256 Gb amin'ny fahafaha-mitahiry betsaka indrindra
Fakan-tsary aoriana Fakan-tsary avo lenta novokarin'i Sony an'ny 13 + 5 mpx focal aperture 2.0
Fakan-tsary aloha 13 mpx miaraka amina mode auto-beauty 2.0 aperture afovoany ary zoro 79.9º malalaka
Conectividad Dual SIM 2 Nano SIM standby na Nano SIM + MicroSD - 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE 800/850/900/1800/2100 / 2600MHz TDD-LTE B40 - Bluetooth 4.0 - GPS sy GLONASS aGPS - WIFI: Internet tsy misy tariby 802.11b / g / n - OTG - OTA
Fitaovana hafa Fitaovana fantsom-baravarankely amin'ny bokotra ao an-trano - Sensor fahazavana manodidina - E-Compass - Sensoran'ny gravity - Sensor akaiky - Awinic Audio Chip -
bateria Novokarin'ny LG avy amin'ny 3ooo mAh 5V2A tsy azo esorina
lafiny X X 153 76.1 7.9 MG
vidiny Ankehitriny ianao dia afaka mividy azy amin'ny vidiny 130 Euros
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » fifaninanana » Raffle a LEAGOO T5 izahay!
Mandray anjara aho, misaotra! 😀
Giorgio Tulio Scampini Chin Aleong dia hoy izy:
Tiako fa dual sim izy, ondrilahy 4GB ary 64 fitadidy azo hatsaraina, fiarovana ny Corning Gorilla Glass 4 amin'ny efijery 5.5 ″ Sharp IPS FullHD ary manana mpamaky rantsantanana ihany koa izy
Valiny tamin'i Giorgio Tulio Scampini Chin Aleong
Edgar cervantes dia hoy izy:
misaotra nanao an'io ho an'ny mpihaino anao?
Valiny tamin'i Edgar Cervantes
Tena tsara ve ilay fitaovana? Misaotra tamin'ny sary?
Qboss dia hoy izy:
Ny tena tiako indrindra - 5.5 ″ Sharp IPS FullHD miaraka amin'ny haitao 2.5D sy Corning Gorilla Glass 4 fiarovana
Mamaly an'i Qboss
Samsung dia manitatra ny fiantohana amin'ny fahitalavitra QLED manerantany hatramin'ny 10 taona
Ahoana ny fomba hananana ny tahan'ny Freedompop 4G maimaimpoana na ny fomba fangatahana fanovana SIM raha efa mpanjifa ianao